Mety hampihena ny isan’ny mpiasa ny fampiasana azy ireny, hoy ny firenena maro. Tsy tokony hatahorana anefa ny firosoana aminy satria fomba vaovao entina hampitomboana ny famokaran’ny orinasa. Hampitatra ny tsena sy ny asa ny firosoana amin’ny teknolojia vaovao. Io teknolojia vaovao io mihitsy aza no hamorona asa vaovao ary hampiakatra ny famokaran’ny orinasa. Ny firosoana amin’ny fanovana dizitaly izao dia manimba ny fomba nentim-paharazana ary manova mihitsy ny rafitra fandraharahana ary hampivoatra haingana be amin'ny orinasa. Miaraka amin'io fampivoarana sehatra dizitaly io dia mihanaka haingana kokoa ny fiantraikan'ny fandrosoana ara-teknolojia ho an'ny daholobe.